Kooxda Daacish oo afduubatay 19 Ruux | Allgalgaduud.Com
Home Dhacdooyinka Todobaadka Kooxda Daacish oo afduubatay 19 Ruux
Kooxda Daacish oo afduubatay 19 Ruux
Maleeshiyo gacansaar la leh kooxda Daacish ayaa afduubtay ugu yaraan 19 qof oo u badna dad rayid ah, kaddib markii ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen magaalada Al-sa’an ee bartamaha wadanka Syria.
Agaasimaha hay’adda kormeereyaasha Syria ee fadhigeedu yahay Ingiriiska Rami Abdurahman ayaa sheegay inkasta oo ku dhawaad maalin kasta ay duqeymo cirka ah fuliyaan Russia oo ah xulufada ugu weyn Syria, haadana Daacish ay weli khatar ku yihiin Syria iyo xoogagga madaxweyne Bashar al-Assad.
“Daacish waxay ku tiirsan tahay unugyada yar yar ee awooda u leh inay ku dhex dhuuntaan goobaha gacanta ugu jira taliska Asad iyo meelaha dadku ku badan yihiin, isla markaana ay fuliyaan weeraro deg deg ah,” ayuu u sheegay VOA oo telefoonka ku wareysatay. “Maleeshiyadan waxay si fiican u yaqaanaan meelaha ay ku dhuumaalaystaan iyo meelaha kale ee ku yaal Syria sida Badiya.” ayuu Rami Abdulrahman sii raaciyay.